Space Station Astronauts Coming Home
ကမ္ဘာတဝှမ်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါခံစားနေရချိန်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသစခန်းကို ရောက်နေတဲ့ အာကာသယာဉ်မှုးတွေရဲ့ အခြေနေကိုသိရအောင် နာဆာအာကာသစူးစမ်းရေးဌာနက ဒေါက်တာပဒေသာတင်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။ ။“အခု လောလောဆယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသစခန်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကနေပြီးတော့ အရင်၆ ယောက် ၇ ယောက်လောက် ရှိတဲ့ ထဲက ၃ ယောက်ပဲ အလုပ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ၃ ယောက် ကမ္ဘာမြေပြင်ကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ရုရှားအာကာသ အေဂျင်စီက ဒုံးပျံနဲ့ သွားခေါ် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ၃ ဦးထဲမှာ တဦးကတော့ အမေရိကန် အမျိုးသမီး အာကာသယာဉ်မှုးပါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသ စခန်းမှာ ၆ ယောက် ၇ ယောက် အလုပ်လုပ်တာက လူအပြည့်လုပ်တာ full participation ပေါ့နော် ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ နာဆာရော၊ ဥရောပ အာကာသ အေဂျင်စီ၊ ရုရှား၊ ဂျပန်စတဲ့ အာကာသ အေဂျင်စီ အတော်များများက ပိတ်ထားရတဲ့ အတွက် ဒီအာကာသ စခန်းမှာ လူအများကြီး ထားပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်က အဆင်မပြေတော့ ပါဘူး။ ဒီမှာလည်း လုပ်နိုင်တဲ့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေး စခန်းတွေမှာ လူအင်အား အရမ်းကို လျှော့ချ လိုက်ရတဲ့ အတွက် ဟိုမှာ ၃ ဦးပဲထား ဖို့ စီစဉ်ပြီးတော့မှ ပြန်ခေါ်လာတာပါ။”
မေး။ ။ “အဲဒီလို ပြန်လာတဲ့ အခါမှာ ဒီအာကာသယာဉ်မှုးတွေ ဒီကမ္ဘာမှာ ကြုံနေရတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုး ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် နာဆာကနေ ဘယ်လို လုပ်ပေးပါသလဲ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။ ။“ကိုရိုနာဗိုင်းရစ်ပ် စဖြစ်တာက ဒီဇင်ဘာလောက်မှာ စဖြစ်နေပါပြီ။ တကမ္ဘာလုံးက သိလာတဲ့ ဇန်နဝါရီလ လောက်မှာ ၆ ယောက် ၇ ယောက် ထား ပြီး အလုပ်လုပ်လို့က မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အာကာသထိန်းချုပ်ရေး စခန်းတွေ အကုန်လုံး ကလည်း လူလျှော့ချ ရမယ် ဆိုတာ သိလာပါပြီ။ အဲတော့ ၃ ယောက်ပဲ ထားရတော့မယ် ဆိုတော့ ကျန်တဲ့. ၃- ၄ ယောက်ကို ပြန်ခေါ်ရတော့မယ် ပေါ့နော်။မခေါ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ အဲဒီထဲမှာ ထူးခြားတာက အမျိုးသမီး အာကာသယာဉ်မှုးChristina Koch ဆိုလို့ရှိရင် သူက အဲဒီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသစခန်းမှာ တင်ထားတာ ဆိုရင် ရက်ပေါင်း ၃၂၈ ရက်ရှိပါပြီ။ ပြန်ခေါ်ဖို့ကလည်း အချိန်ကိုက် ဖြစ်နေတာမို့ သူ့ကို ဖေဖေါ်ဝါရီ လဆန်းမှာ ပြန်ခေါ်တာ ပေါ့နော်။
အဲဒီတော့ ပြန်ခေါ်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒီက သွားကြိုတဲ့ လူတွေမှာ ရောဂါလုံးဝ ရှိလို့ မဖြစ်ဖူး။ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ပို့လိုက်တဲ့ အာကာသယာဉ်မှုးတွေက ဒီအာကာသထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ၊ ကိုယ်ခံအားကျတဲ့ရောဂါလို ရောဂါတွေကိုသုတေသနလုပ်ချင်လို့ တင်ထားရ တာပါ။ဒါကြောင့် ရောဂါ ကူးမသွားဖို့ တော်တော်ကို စီစဉ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့် သူတို့ကို ဘာလုပ်ထားသလဲ ဆိုတော့ သွားကြိုတဲ့ အဖွဲ့ကို သေချာ quarantine လုပ်ထားရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာ ရေး အခြေနေ လုံးဝ ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ အခါကျမှ ဒီယာဉ်မှုး ၃ ဦး ပြန်လာတာကို သွားကြိုရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ရုရှားနိုင်ငံ ကာဇတ်စတန် ပြည်နယ်က မျက်ခင်းပြင်ကြီးထဲမှာ အာကာသယာဉ်က ဆင်းတဲ့အခါ သွားကြိုရပါတယ်။
တယောက် ကတော့ ရုရှားဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ Star City ဆိုတဲ့ အာကာသ စခန်းကို ပြန်ပို့တယ်။ နောက် ၂ ဦးကတော့နာဆာက အမေရိကန် အာကာသယာဉ်မှုး တွေ ဖြစ်တဲ့ Jessica Meir နဲ့ Andrew Morgan တို့ပါ။ သူတို့ကိုတော့ နာဆာရဲ့ လေယာဉ်ပျံနဲ့ ဘာလင်ကို ခေါ်သွားပါတယ်။ ဘာလင်မှာ ခေတ္တနားပြီး တော့ သူတို့ကိုအခု တက်စ် စက်စ် ပြည်နယ် Houston မှာရှိတဲ့ Johnson Space Flight စင်တာမှာ သူတို့ကို သီးသန့် အခန်းတွေမှာ ထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ ဖေဖေါ်ဝါရီလ တုန်းက ပြန်လာတဲ့ Christina Koch ကတော့ Johnson Space Flight စင်တာကို ပြန်ရောက်နေကတည်းက အဲဒီမှာ သုတေသန လုပ်နေပါပြီ။”
မေး။ ။“လူဟာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ နေတာနဲ့ အာကာသထဲ နေတာ မတူပါဘူး။ ပြောင်းလဲတာတွေ အများကြီး ရှိတယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ဆိုတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသ စခန်းမှာ နေတဲ့ အာကာသယာဉ်မှုး တွေဟာ ကမ္ဘာကနေ ထွက်သွားတဲ့ အခါ အပြောင်းအလဲ ဘာတွေ ရှိသလဲ ပြောပြပေးပါ။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်။.။”အဓိကက ဘာလဲဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ဆွဲအား လုံးဝ မရှိတော့တဲ့ နေရာ ရောက်သွားပြီ ပေါ့နော် ။ အဲတော့ လူတွေက လမ်းလျှောက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကမ္ဘာ့ဆွဲအား မရှိတဲ့အတွက်။ အဲဒီတော့ သူတို့က မျောနေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲဒါအပြင် ကမ္ဘာကနေ အထက် မိုင် သုံးလေးရာလောက် ရောက်သွားတဲ့ နေရာ ဆိုတဲ့အခါ ကျတော့ အပြင်မှာ ရှိတဲ့ ကော့စမစ် ရောင်ခြည် Cosmic radiation ဆိုတဲ့ သတ္တဝါတွေအတွက် ဇီဝ အန္တရာယ် လုံးဝ ဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေ ပိုများလာတဲ့အတွက် အဲဒီ နေရာကို ရောက်သွားပြီ ဆိုရင် အဲဒီအကြောင်း ၂ ခုကြောင့် ဇီဝ ပြောင်းလဲမှု တွေက အများကြီး ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် ရောဂါတွေ ပေါ်လာတာ တွေ့ရပါတတ်။ ဘယ်လို ရောဂါမျိုးလည်း ဆိုတော့ အရိုးပွ ရောဂါ bone density lost ဖြစ်သွားတာ၊ နောက်တခုက လူကို ဖွဲ့စည်းထားတာက အရည်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာက ၉ ၀% ဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဆွဲအား လုံးဝ မရှိတဲ့ နေရာလည်း ရောက်သွားရင်အရည် စီးဆင်းမှုဟာ လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဆွဲအားမရှိတော့ဘူးကိုး။ အဲ့တော့ အောက်ကို အလေးချိန်ကမကျတော့ဘူးပေါ့။
ဥပမာ အားဖြင့် နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုက အစ သွေးလည်ပတ်တဲ့ နှုန်းက အစ အကုန်လုံးဝ ပြောင်းသွားတယ်။ အရည်လည်ပတ်မှု ပြောင်းသွားတဲ့ အခါကျတော့ ဖိအားလည်း ပြောင်းသွားတယ်လေ။ အဲဒီတော့ နှလုံး ရောဂါလိုဟာမျိုး စဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အာကာသယာဉ်မှုး တွေမှာ။ နောက် အရိုးပွ ရောဂါ၊ မေ့တာ၊ ကြီးလာရင် ဖြစ်တဲ့ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါလိုဟာမျိုးပါ။ နောက် ကိုယ်ခံအားတွေ။ ဖိအားပြောင်းသွားတာကြောင့် မျက်လုံးထဲမှာ ရှိတဲ့ အရည် မျက်လုံးအိမ်မှာ ဖိအားက ပိုများလာတဲ့အတွက် အမြင်မကြည်လင်တာတွေ၊ နောက်တခုက ကိုယ်ခံအားတွေ ကျသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကိုယ်ခံအားကျသွားသလဲ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ အခုထိ သုတေသန လုပ်တုန်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလို ကိုယ်ခံအား ကျသွားခြင်းအားဖြင့် သွေးကင်ဆာ မဖြစ်အောင် တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအား စံနစ် immunity system ကျသွားတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။”
မေး။ ။“နာဆာက ဆိုရင် ဆေးသုတေသန တွေ အတွက် အာကာသထဲမှာ သွားလုပ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စမ်းသပ်မှုတွေကို အာကာသထဲမှာ လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား။”
ဒေါက်တယပဒေသာတင်။.။“ရှိပါတယ်။ ရှိကိုရှိမှာပါ။ဘာလို့လည်း ဆိုရင် space biology နဲ့space medicine အာကာသဆေး သုတေသနနဲ့ အာကာသ ဇီဝဗေဒ သုတေသန တွေ လုပ်နေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပါပြီ၊ ဒီလိုသုတေသနတွေ လုပ်လာတာ။ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားမဲ့တဲ့ နေရာမှာ ဆေးပေါင်းစပ်မှုက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဆေးတွေ စပေါင်းလာပြီ၊ မော်လီကျူးတွေ စပြီးတော့ တခုနဲ့တခု တွဲလာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် သူက သူ့ရဲ့ သိပ်သည်းဆက များတဲ့အတွက် ဆေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ အရည်မှာ အနည်ထိုင်သွားပါတယ်။ အနည်ထိုင်သွားတာက ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကြောင့်လေ။ အာကာသစခန်းထဲမှာ ကျတော့ ကမ္ဘာ့ဆွဲအား မရှိတဲ့အတွက် အနည်မထိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆေးက ပိုအစွမ်းရှိပြီး ပိုပြီးထက်မြက်တဲ့ဆေး ပုံစံမျိုးတွေကို ထွင်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလို သုတေသနတွေ လုပ်တာကလည်း ကြာပါပြီ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သုတေသန ဆေးသုတေသနလုပ်ဖို့ မကြာခင်စပြီးတော့ စီစဉ်မယ် ဆိုတာ သေချာပါတယ်။”
ဒေါက်တာပဒေသာတင်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ သိပ္ပွ္ပွံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ကမ်ဘာတဝှမျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါခံစားနရေခြိနျမှာ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသစခနျးကို ရောကျနတေဲ့ အာကာသယာဉျမှုးတှရေဲ့ အခွနေကေိုသိရအောငျ နာဆာအာကာသစူးစမျးရေးဌာနက ဒေါကျတာပဒသောတငျကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။ ။“အခု လောလောဆယျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသစခနျးမှာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ လလောကျကနပွေီးတော့ အရငျ၆ ယောကျ ၇ ယောကျလောကျ ရှိတဲ့ ထဲက ၃ ယောကျပဲ အလုပျလုပျဖို့ စီစဉျပါတယျ။ မကွာသေးခငျက ၃ ယောကျ ကမ်ဘာမွပွေငျကို ပွနျရောကျလာပါတယျ။ ရုရှားအာကာသ အဂေငျြစီက ဒုံးပြံနဲ့ သှားချေါ ခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ ၃ ဦးထဲမှာ တဦးကတော့ အမရေိကနျ အမြိုးသမီး အာကာသယာဉျမှုးပါ။ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသ စခနျးမှာ ၆ ယောကျ ၇ ယောကျ အလုပျလုပျတာက လူအပွညျ့လုပျတာ full participation ပေါ့နျော ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ နာဆာရော၊ ဥရောပ အာကာသ အဂေငျြစီ၊ ရုရှား၊ ဂပြနျစတဲ့ အာကာသ အဂေငျြစီ အတျောမြားမြားက ပိတျထားရတဲ့ အတှကျ ဒီအာကာသ စခနျးမှာ လူအမြားကွီး ထားပွီး အလုပျလုပျဖို့အတှကျက အဆငျမပွတေော့ ပါဘူး။ ဒီမှာလညျး လုပျနိုငျတဲ့မွပွေငျထိနျးခြုပျရေး စခနျးတှမှော လူအငျအား အရမျးကို လေြှာ့ခြ လိုကျရတဲ့ အတှကျ ဟိုမှာ ၃ ဦးပဲထား ဖို့ စီစဉျပွီးတော့မှ ပွနျချေါလာတာပါ။”
မေး။ ။ “အဲဒီလို ပွနျလာတဲ့ အခါမှာ ဒီအာကာသယာဉျမှုးတှေ ဒီကမ်ဘာမှာ ကွုံနရေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ရောဂါပိုး ဒဏျနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ရငျဆိုငျနိုငျအောငျ နာဆာကနေ ဘယျလို လုပျပေးပါသလဲ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။ ။“ကိုရိုနာဗိုငျးရဈပျ စဖွဈတာက ဒီဇငျဘာလောကျမှာ စဖွဈနပေါပွီ။ တကမ်ဘာလုံးက သိလာတဲ့ ဇနျနဝါရီလ လောကျမှာ ၆ ယောကျ ၇ ယောကျ ထား ပွီး အလုပျလုပျလို့က မဖွဈနိုငျတော့ဘူး။ အာကာသထိနျးခြုပျရေး စခနျးတှေ အကုနျလုံး ကလညျး လူလေြှာ့ခြ ရမယျ ဆိုတာ သိလာပါပွီ။ အဲတော့ ၃ ယောကျပဲ ထားရတော့မယျ ဆိုတော့ ကနျြတဲ့. ၃- ၄ ယောကျကို ပွနျချေါရတော့မယျ ပေါ့နျော။မချေါလို့ မဖွဈဘူး။ အဲဒီထဲမှာ ထူးခွားတာက အမြိုးသမီး အာကာသယာဉျမှုးChristina Koch ဆိုလို့ရှိရငျ သူက အဲဒီ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသစခနျးမှာ တငျထားတာ ဆိုရငျ ရကျပေါငျး ၃၂၈ ရကျရှိပါပွီ။ ပွနျချေါဖို့ကလညျး အခြိနျကိုကျ ဖွဈနတောမို့ သူ့ကို ဖဖေျေါဝါရီ လဆနျးမှာ ပွနျချေါတာ ပေါ့နျော။
အဲဒီတော့ ပွနျချေါမယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ဒီက သှားကွိုတဲ့ လူတှမှော ရောဂါလုံးဝ ရှိလို့ မဖွဈဖူး။ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ပို့လိုကျတဲ့ အာကာသယာဉျမှုးတှကေ ဒီအာကာသထဲမှာ ဖွဈတဲ့ ရောဂါ၊ ကိုယျခံအားကတြဲ့ရောဂါလို ရောဂါတှကေိုသုတသေနလုပျခငျြလို့ တငျထားရ တာပါ။ဒါကွောငျ့ ရောဂါ ကူးမသှားဖို့ တျောတျောကို စီစဉျရပါတယျ။ဒါကွောငျ့ သူတို့ကို ဘာလုပျထားသလဲ ဆိုတော့ သှားကွိုတဲ့ အဖှဲ့ကို သခြော quarantine လုပျထားရပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကနျြးမာ ရေး အခွနေေ လုံးဝ ကောငျးတယျ ဆိုတဲ့ အခါကမြှ ဒီယာဉျမှုး ၃ ဦး ပွနျလာတာကို သှားကွိုရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ ရုရှားနိုငျငံ ကာဇတျစတနျ ပွညျနယျက မကျြခငျးပွငျကွီးထဲမှာ အာကာသယာဉျက ဆငျးတဲ့အခါ သှားကွိုရပါတယျ။
တယောကျ ကတော့ ရုရှားဖွဈတဲ့အတှကျ သူ့ရဲ့ Star City ဆိုတဲ့ အာကာသ စခနျးကို ပွနျပို့တယျ။ နောကျ ၂ ဦးကတော့နာဆာက အမရေိကနျ အာကာသယာဉျမှုး တှေ ဖွဈတဲ့ Jessica Meir နဲ့ Andrew Morgan တို့ပါ။ သူတို့ကိုတော့ နာဆာရဲ့ လယောဉျပြံနဲ့ ဘာလငျကို ချေါသှားပါတယျ။ ဘာလငျမှာ ခတ်ေတနားပွီး တော့ သူတို့ကိုအခု တကျဈ စကျဈ ပွညျနယျ Houston မှာရှိတဲ့ Johnson Space Flight စငျတာမှာ သူတို့ကို သီးသနျ့ အခနျးတှမှော ထားပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ ဖဖေျေါဝါရီလ တုနျးက ပွနျလာတဲ့ Christina Koch ကတော့ Johnson Space Flight စငျတာကို ပွနျရောကျနကေတညျးက အဲဒီမှာ သုတသေန လုပျနပေါပွီ။”
မေး။ ။“လူဟာ ကမ်ဘာကွီးပျေါမှာ နတောနဲ့ အာကာသထဲ နတော မတူပါဘူး။ ပွောငျးလဲတာတှေ အမြားကွီး ရှိတယျ လို့ ပွောပါတယျ။ ဆိုတော့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသ စခနျးမှာ နတေဲ့ အာကာသယာဉျမှုး တှဟော ကမ်ဘာကနေ ထှကျသှားတဲ့ အခါ အပွောငျးအလဲ ဘာတှေ ရှိသလဲ ပွောပွပေးပါ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျ။.။”အဓိကက ဘာလဲဆိုတော့ ကမ်ဘာ့ဆှဲအား လုံးဝ မရှိတော့တဲ့ နရော ရောကျသှားပွီ ပေါ့နျော ။ အဲတော့ လူတှကေ လမျးလေြှာကျစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကမ်ဘာ့ဆှဲအား မရှိတဲ့အတှကျ။ အဲဒီတော့ သူတို့က မြောနတေဲ့ ပုံစံမြိုး ဖွဈနတောပေါ့။အဲဒါအပွငျ ကမ်ဘာကနေ အထကျ မိုငျ သုံးလေးရာလောကျ ရောကျသှားတဲ့ နရော ဆိုတဲ့အခါ ကတြော့ အပွငျမှာ ရှိတဲ့ ကော့စမဈ ရောငျခွညျ Cosmic radiation ဆိုတဲ့ သတ်တဝါတှအေတှကျ ဇီဝ အန်တရာယျ လုံးဝ ဖွဈစတေဲ့ ဓါတျရောငျခွညျတှေ ပိုမြားလာတဲ့အတှကျ အဲဒီ နရောကို ရောကျသှားပွီ ဆိုရငျ အဲဒီအကွောငျး ၂ ခုကွောငျ့ ဇီဝ ပွောငျးလဲမှု တှကေ အမြားကွီး ဖွဈသှားတဲ့ အတှကျ ရောဂါတှေ ပျေါလာတာ တှရေ့ပါတတျ။ ဘယျလို ရောဂါမြိုးလညျး ဆိုတော့ အရိုးပှ ရောဂါ bone density lost ဖွဈသှားတာ၊ နောကျတခုက လူကို ဖှဲ့စညျးထားတာက အရညျနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာက ၉ ဝ% ဖွဈနပေါတယျ။ကမ်ဘာ့ဆှဲအား လုံးဝ မရှိတဲ့ နရောလညျး ရောကျသှားရငျအရညျ စီးဆငျးမှုဟာ လုံးဝ ပွောငျးလဲသှားတယျ။ ဆှဲအားမရှိတော့ဘူးကိုး။ အဲ့တော့ အောကျကို အလေးခြိနျကမကတြော့ဘူးပေါ့။
ဥပမာ အားဖွငျ့ နှလုံးသှေးလညျပတျမှုက အစ သှေးလညျပတျတဲ့ နှုနျးက အစ အကုနျလုံးဝ ပွောငျးသှားတယျ။ အရညျလညျပတျမှု ပွောငျးသှားတဲ့ အခါကတြော့ ဖိအားလညျး ပွောငျးသှားတယျလေ။ အဲဒီတော့ နှလုံး ရောဂါလိုဟာမြိုး စဖွဈတာ တှရေ့ပါတယျ။ အာကာသယာဉျမှုး တှမှော။ နောကျ အရိုးပှ ရောဂါ၊ မတေ့ာ၊ ကွီးလာရငျ ဖွဈတဲ့ အယျဇိုငျးမားရောဂါလိုဟာမြိုးပါ။ နောကျ ကိုယျခံအားတှေ။ ဖိအားပွောငျးသှားတာကွောငျ့ မကျြလုံးထဲမှာ ရှိတဲ့ အရညျ မကျြလုံးအိမျမှာ ဖိအားက ပိုမြားလာတဲ့အတှကျ အမွငျမကွညျလငျတာတှေ၊ နောကျတခုက ကိုယျခံအားတှေ ကသြှားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ကိုယျခံအားကသြှားသလဲ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကြ ပွောလို့ မရသေးပါဘူး။ အခုထိ သုတသေန လုပျတုနျး ရှိပါသေးတယျ။ ဒီလို ကိုယျခံအား ကသြှားခွငျးအားဖွငျ့ သှေးကငျဆာ မဖွဈအောငျ တိုကျဖကျြပေးနိုငျတဲ့ ကိုယျခံအား စံနဈ immunity system ကသြှားတယျ ဆိုတာကို တှရေ့ပါတယျ။”
မေး။ ။“နာဆာက ဆိုရငျ ဆေးသုတသေန တှေ အတှကျ အာကာသထဲမှာ သှားလုပျပါတယျ။ အဲဒီတော့ ကိုဗဈ ၁၉ နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ စမျးသပျမှုတှကေို အာကာသထဲမှာ လုပျဖို့ အစီအစဉျရှိပါသလား။”
ဒေါကျတယပဒသောတငျ။.။“ရှိပါတယျ။ ရှိကိုရှိမှာပါ။ဘာလို့လညျး ဆိုရငျ space biology နဲ့space medicine အာကာသဆေး သုတသေနနဲ့ အာကာသ ဇီဝဗဒေ သုတသေန တှေ လုပျနတော နှဈပေါငျးမြားစှာရှိပါပွီ၊ ဒီလိုသုတသေနတှေ လုပျလာတာ။ ကမ်ဘာ့ဆှဲအားမဲ့တဲ့ နရောမှာ ဆေးပေါငျးစပျမှုက ပိုကောငျးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတော့ ဆေးတှေ စပေါငျးလာပွီ၊ မျောလီကြူးတှေ စပွီးတော့ တခုနဲ့တခု တှဲလာပွီ ဆိုလို့ရှိရငျ သူက သူ့ရဲ့ သိပျသညျးဆက မြားတဲ့အတှကျ ဆေးပေါငျးစပျနတေဲ့ အခြိနျမှာ သူ့ အရညျမှာ အနညျထိုငျသှားပါတယျ။ အနညျထိုငျသှားတာက ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတော့ ကမ်ဘာ့ဆှဲအားကွောငျ့လေ။ အာကာသစခနျးထဲမှာ ကတြော့ ကမ်ဘာ့ဆှဲအား မရှိတဲ့အတှကျ အနညျမထိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဆေးက ပိုအစှမျးရှိပွီး ပိုပွီးထကျမွကျတဲ့ဆေး ပုံစံမြိုးတှကေို ထှငျလို့ ရပါတယျ။ ဒီလို သုတသေနတှေ လုပျတာကလညျး ကွာပါပွီ။ ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့၊ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ သုတသေန ဆေးသုတသေနလုပျဖို့ မကွာခငျစပွီးတော့ စီစဉျမယျ ဆိုတာ သခြောပါတယျ။”
ဒေါကျတာပဒသောတငျရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျရဲ့ သိပ်ပ်ှပံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။
အာဆီယံ-အမေရိကန် အမျိုးသမီးသိပ္ပံဆု ၂၀၂၀ ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင် ဒေါက်တာသဲဝင့်အောင်